Suldaan Suleymaan Al Qaanuuni - Wikipedia
Suldaan Suleymaan Al Qaanuuni
Suldaan Süleymaan 1aad (Kanuni Sultan Süleyman I: Af-Turki) waxa uu ahaa suldaanka 10aad ee Dawladda Cosmaniya. Waqtigii Boqor Sulaymaan Al-qaanuuni waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa xiligii dowladda Cusmaaniyiinta ay awooda badnayd.Waxaana loo yaqanaa waqtigii dahabiga ahaa , 48 sano oo uu xilka hayey boqor Sulaymaan Al-qaanuuni waxay gaartay dowladdu balaar aysan waligeed gaarin, waxayna goboladii dowladdii Cusmaaniyiinta ku faafsanayd saddex qaaradood. Wuxuu ku dhashey Sulayman Al-qanuuni magaladad Taraabsuun, xiligaa oo uu aabihii ka talinayey magaladaa.wuxuuna aabihiisa u barbaariyey si wanaagsan isaga oo culuum kala duwan baray ko Diini iyo Cilmiga hogaaminta iyo maamulk.Xilka wuxuu qabtay asagoo jira 26 sano mana ahayn qof ku deg-dega wuxuu qabanayo ee wuxuu ahaa qof u fekera oo go’aan markuu qaatana aan ka noqonin.
SIDEE UGA ADKAADAY KACDOONADII IYO FIDNOOYINKII SOO WAJAHAYEdit
Sanadahii ugu horeeyey ee xiligii sulaymaan Al-qaanuuni wuxuu wajahay afar kacdoon oo ka mashquuliyey dhaqdhaqaaqii jihaadka. kuwaas oo gudoomiyaashii qayb ka mid ah ay moodeen in heleen fursad ay kaga go’ikaraan dowlada Wiilka dhallinyaradi ah hogaaminayo: Kacdoonkii 1aad: Waxaa sameeyey Jaam Baras Qasaali oo ahaa guddoomiyihii Shaam wuxuuna ku dhawaaqay inuu kasoo horjeestay dowladda, wuxuuna isku dayey inuu qabsado Xalab laakiin wuu ku fashilmay. Wuxuuna amray Sulaymaan Al-qaanuuni in la damiyo fitnada uu wadey Jaam, waxaana madaxiisa loo soo diray Istanbuul ayadoo daliil looga dhigayo inuu dhamaaday kacdoonkii. Kacdoonkii 2aad: waxaa sameeyey khaainkii waynaa Axmad Bashaa Masar kasoo waligii jeclaa in loo dhiibo xilka (SADRUL ACDAM oo ahaa xilka ugu sareeyey ee uu qof ka qabta xiligii dowlada cusmaaniyiinta wuxuuna hada xilkaas u dhigmaa Raysal Wasaare xiligeena).Laakiin kuma guulaysan inuu hadafkiisa gaaro, wuxuuna codsay in loo doorto gudoomiyaha Msar, markuu Masar tagay wuxuu isku deyey inuu dadka dhiniciisa u soo jeediyo wuxuuna naftiisa u doortay boqor gooni ka ah boqortooyadii cusmaaniyiinta, laakin dadkii cilmiga lahaa iyo ciidamidii dowladda cusmaaniyiinta ma aysan aqbalin wayna dileen. Kacdoonkii 3aad: waxaa sameeyey Baabuduun oo ahaa shiici (Raafidi ah), wuxuu soo aruuriyey dad gaaraya 3000 ilaa 4000 oo kacdoon wadayaal ah gobolka Yusgaadh, wuxuuna dulsaaray gobolkaa canshuur ilaa uu gaaray heer uu jabiyey ciidamadii cusmaaniyiinta. Inkastoo markii dambe uu ku dhamaaday in madaxii Baabuduun loo diro istabuul. Kacdoonkii 4aad: waxaa hogaaminayey Qalandar Jallabi oo ahaa asagana shiici Tageerayaashiisa waxay gaareen 30,000 waxayna dileen muslimiint suniga ahaa ee gobolka Kooniya iyo Marcash.Bahraan baasha ayaa loo direy si uu u horistaago kacdoonka socday balse waa la diley.Sadral Acdamkii Ibraahim Baasha ayaa ku guulaystay inuu dhinaciisa u soo jeediyo ama u soo jiito qaar ka mid ah taageerayashii qalandar jallabi waana la dilay.
QORSHIHII SIYAASIGA AHAA EE U DAJIYEY YURUBEdit
1) furashadii RODAS: waxay ahayd jasiirad dhib badan dhufays adagna u ahayd dagaalyahanadii qadiisul Hanaa ( kuwaas oo jidgooyo u dhigan jiray xujaajta Turkida ahaa ee xijaas u socda )Sidaa darteed wuxuu Sulaymaan Al-qaanuuni daryeel siiyey furashada Rodas wuxuuna qaaday dagaal wayn dhexbartamihii 1522dii waana furtay. Wuxuuna u ogaaladay dagaalyahanadii inay ka baxaan magaalada. 2) Dagaalkii Majar(Hungary) iyo go’doomintii Fiyaana(Viana) boqorkii Majar Filaslidaafkii labaad wuxuu go’aansaday inuu burburiyo cahdiyadii boqoradii asaga ka horeeyey ay siiyeen dowlada cusmaaniyiinta wuxuuna gaaray heer uu dilay ninkii uu soo dirsaday Sulaymaan Al-qaanuuni si uu u qaado canshuurtii sanad laha ahayd sidaa darteed wuxuu kaga jawaabay dagaal uu ku qaaday Majar 1521dii wuuna socday ilaa uu ku guulaystay dagaalkii Muhaakas 1526. Wuxuuna qabsaday magaalada Buuda wuuna sii waday dagaalka ilaa ciidankiisu gaaray magaalada Fiyeena laakiin uma suurta gelin inuu furto.
Siyaasada Isu dhowaanshaha Sulayman Al-qaanuuni iyo Boqorkii France: Ka dib markii la arkay awoodii Sulayman iyo Boqortooyadii Cusmaaniyada oo meelo badan oo daafaha dunida gaartay iyo xaalkii Yurub markaas oo aad uliitay oo dagaalo sokeeye ku jiray iyo dib dhac weyn, ayaa boqorkii France ee Faransigii 1aad oo tartan kula jiray boqorkii Romanka, ayuu arkay fursad inay tahay uu Yurubta kale kaga adkaan karo gaar ahaana dowlada Cusmaaniyada oo joojin karta Awoodii Boqorka Romanka ee Charles kii Shanaad waxaana ka dhaxeeyey labadooda tartan dhanka kursiga boqortoyadii Roomaanka.
1535 ayuu Boqorkii France diray Xogyihiisii Jan De Laforeh si uu heshiis ula saxiixdo Sulayman Al-qanuuni, waxaana heshiiskaas loo baxshay “ Mucaahadada gaarka ah ee Cusmaaniyada iyo Faransiiska”, ahamiyada gaarka ah ee ay lahayd aowgeed heshiiskaas, waxaan soo bandhigaynaa qodobadii ugu muhiimsanaa:
1- France waxay ka faa’iidaysatay u dhowaanshiyaha Cusmaaniyada Ciidan ahaan, Dhaqaale ahaan, Siyaasad ahaan, waxayna ka yeelatay mucaahadadaas inay ku furato albaabo hor le hoo ganacsiga Bariga taasoo markii xoog ay ku haysatay Burtiqiiska kadibkii markii ay heshay marin badeedka Koonfur Africa, waxayna doonyaha France ku marijireen si xuriyad ah.
2- France waxay xaq u heshay inay ka ganacsan karto Gudaha dowlada Cusmaaniyada.
3- Canshuuraha Kastamyada ayay france hal mar siinaysaa Dowladda Cusmaaniyada.
4- Canshurta ay bixinayaan ganacsatada Faransiiska waxay la mid tahay kuwa ay Turkida bixiyaan ee ka ganacsada France.
5- Qunsilayad ayay France ka furan kartaa Dowlada Cusmaaniyada, Qunsulkuna wuxuu helayaa Xasaanad isaga, ehelkiisa iyo Shaqaalihiisaba.
6- Qunsulka Faransiiska wuxuu eegi karaa falal dambiiyeedka Madaniga iyo Military ga ah kuwaasaa ay geystaan faransiiska ku nool Dowladda Cusmaaniyada isaga oo kaashaanaya Maxkamadaha Dowladda Cusmaaniyada si xukunka loogu fuliyo Dambiilayaasha.
7- Fal dambiyeedka Faransiisku ay geystaan oo kula kacaan Cusmaaniyiinta lama Xukumayo, Maxkamadana uma yeerayso ilaa uu yimaado Turjumaanka Qunsulka.
8- Xuriyada Diinta iyo Cibaada ayaa la qiray.
9- Waxaa la joojiyey adoonsiga Raciyada Boqorka.
Sidoo kale Dowladii Cusmaaniyada ayaa heshay awood dheeraad ah, waxayna weerar ku qaaday Doonyihii dagaalka ee xeebta Boqortooyada Nasbooli ee hoostimaaday boqor Charle Kant 1543. Waxay kaloo weerartay “Nasir” ee hoos timaaday Safoy oo isna Xulufo la ahaa Charle Kant.
Ma ahayn xilligii Sulaymaan Al-qaanuuni mid Dowladii Cusmaaniyada ay ugu dhul fidis badanayd, ee wuxuu ahaa xilligii dowladii ugu waynayd ee Nidaam, Awood iyo Cadaalad isku Darsatay.Wuxuu geeriyaday Boqor Sulayman Al-qaanuuni isaga oo hareereeyey magaaladii Siiktowar ee Badda ku tiilay 5 September 1566/ 20 Safar 974H.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Suldaan_Suleymaan_Al_Qaanuuni&oldid=202336"
Last edited on 15 Juun 2020, at 23:11
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Juun 2020, marka ee eheed 23:11.